MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardBig Game Event mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT Weekly Community Cup
MPT ကနေ ကျင်းပတဲ့ PUBG နဲ့ MLBB ဂိမ်းပြိုင်ပွဲကို အပတ်စဥ် ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ဆုကြေးငွေအဖြစ် USD စုစုပေါင်း ၃,၀၀၀ ကျော်ကို အပတ်စဥ်ပေးအပ်သွားမှာပါ။ MPT အသုံးပြုသူများအားလုံး ဒီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
MVP $100 $100
အပတ်စဥ် သောကြာနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့အတွင်း
စက်တင်ဘာ (၁၅) ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ရက်နေ့အထိ (၈ပတ်)
1. MPT ရဲ့ Weekly Community Cup ကဘာလဲ?
PUBG နဲ့ MLBB မှာယှဥ်ပြိုင်ကစားရမယ် အွန်လိုင်းဂိမ်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ (၈) ပတ်ဆက်တိုက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပတ်စဥ်မှာ အနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဆုကြေးငွေအဖြစ် USD 700 ကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. ဘယ်သူတွေပါဝင်နိုင်လဲ ?
အသင်းတွင်ပါဝင်သူတိုင်း MPT အသုံးပြုသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အပတ်စဥ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်း Myanmar Esports Club Facebook Page ကနေ စာရင်းပေးသွင်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် Myanmar Esports Club Facebook Page ကို Follow လုပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
4. အသင်း တစ်သင်းမှာဘယ်နယောက်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်လဲ?
MLBB ဂိမ်းကိုယှဥ်ပြိုင်ကစားမယ့်သူတွေအနေနဲ့ အသင်းတစ်သင်းကို ၅ ယောက်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပြီး PUBG ကိုယှဥ်ပြိုင်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ အသင်းတစ်သင်းမှာ ၄ ယောက်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသင်းဝင်တိုင်းက MPT အသုံး ပြုသူများဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
MLBB နဲ့ PUBG အွန်လိုင်းဂိမ်းပြိုင်ပွဲကိုအပတ်စဥ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ပထမဆုကနေစတုတ္ထဆုအထိ အပတ်စဥ်ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်အပတ်စဥ်ဂိမ်းပြိုင်ပွဲအဆုံးသတ်တိုင်း အကောင်းဆုံးကစားသမားကိုရွေးချယ်ပြီးဆုချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပတ်စဥ်ဂိမ်းပြိုင်မှာအနိုင်ရရှိသွားသူများကို MPT ၏ ကိုယ်စားပြု agency မှဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဆုကြေးငွေကိုမည့်သို့ထုတ်ယူရမည်ကို ဆက်သွယ် ပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။